Technical Writer ဆိုတာဘာလဲ။ Technical Writer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ - Digital Laboratory Myanmar
Technical Writer ဆိုတာဘာလဲ။ Technical Writer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ
Technical Writer ဆိုတာဘာလဲ
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ နည်းပညာ မပါ၀င်၊ မပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် လူတိုင်းမဟုတ်တောင် လူအများစုကတော့ နည်းပညာနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မရှိနေကြ သေးပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ client တွေကြားမှာရှိတဲ့ ထိုကဲ့သို့ကွာဟချက်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ နည်းပညာနဲ့အကျွမ်းတ၀င်မရှိကြတဲ့ သူတွေကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါတယ်။
Technical Writer ဆိုသည်မှာ အမျိုးမျိုးသော documentation, educational materials, product တစ်ခုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ instruction manual တွေကို ရေးသားဖန်တီး ပေးတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့ Documentation များတွင် user guides, instructions, manual အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး ပါဝင်နိုင်တယ်။
Technical Writer တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာ၀န်တွေကတော့
Software product တွေအတွက် Instruction manuals တွေကို ရေးသား ဖန်တီးပေးရပါမယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ Technical အချက်အလက်တွေကို Clients တွေ နားလည်လွယ်တဲ့ user guide တွေ၊ documentation တွေအဖြစ်ပြန်လည်ဖန်တီးရေးသားပေးနိုင်ရပါမယ်။
Technology တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်မယ့် High-quality Technical Documentation တွေကို ဖန်တီးပေးရပါမယ်။
အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လိုအပ်တဲ့ Technical ဆိုင်ရာ Documentation တွေဖန်တီးပေးရပါမယ်။
Technical Writer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ
Technical Documentation တွေနဲ့ Instructional Materials တွေရေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Grammar နဲ့ Writing Skill တွေ ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Technical Product တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကြွယ်၀နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူစိတ်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Documentation များတွင် Demo Videos တွေပါ၀င်တာကြောင့် Video Editing Skill ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Technical Writer တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ တာဝန်တွေကတော့
Technical documentations တွေ၊ manuals တွေကို စာဖတ်သူနားလည်လွယ်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးသားပေးနိုင်ရပါမယ်။
ကိုယ်ရေးရမယ့် Technical Product အကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာထားပြီး ကောင်းကောင်း နားလည်နေရပါမယ်။
Writing Process ကို Planning လုပ်ပြီးတော့ Timeline နဲ့ Deadline ထားပြီး လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Customers တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့Team members တွေဆီက feedback တွေရလာတဲ့အခါ အမှားတွေကို ပြင်ဆင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Documentations တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ရပါမယ်။
Technical Documentations တွေ၊ User Manuals တွေကို စာဖတ်သူ နားလည်လွယ်အောင် ပုံတွေနဲ့တကွ step by step ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ရေးသားရပါမယ်။
Software product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ demo video တွေအတွက် script တွေကို ရေးသား ဖန်တီးပေးရပါမယ်။
အောင်မြင်တဲ့ Technical Writer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် နားလည်လွယ်တဲ့ High Quality Technical Document တွေ၊ User manual တွေနဲ့ Software Instruction Guides တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အမြန်ဆုံးဖန်တီးပေးနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Automatic စနစ်များကို အသုံးပြုပြီး သင်ရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ Remote IT Team တစ်ခုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်သင့်လဲ။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ချမှတ်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုကို ရယူခြင်း
အရာရာကိုအကောင်းမြင်စိတ်ထားပြီး ရင့်ကျက် တည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လိုမွေးမြူကြမလဲ
သင်နဲ့လိုက်ဖက်သော သစ်သီးပုံစံအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရှာဖွေပြီး သင်၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်လိုက်ပါ။
Systems Integrator ဆိုတာဘာလဲ။ Systems Integrator Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ?
အောင်မြင်တဲ့ Technical Marketing Engineer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ။￼
Collaborative Work Management ဆိုတာဘာလဲ။ Collaborative Work Management နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘာတွေ သိထားဖို့လိုအပ်သလဲ။
Digital Workplace ဆိုတာဘာလဲ။ Digital Workplace နှင့်ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘာတွေ သိထားဖို့လိုအပ်သလဲ။
© Digital Laboratory Myanmar Co.,Ltd. All Rights Reserved.